Jery taratra… herinandro: fifidianana… hampilamina | NewsMada
Jery taratra… herinandro: fifidianana… hampilamina
Nilaza ny Komity iombonana ho amin’ny Dinam-pifanarahana ho an’ireo kandidà mba hisian’ny fitoniana amin’ny fifidianana fa tsy hanerena ireo kandidà ho filohan’ny Repoblika ny fanaovan-tsonia ny Dinam-pifanarahana. Ny mpifidy no hitsara ireo kandidà manao sonia na tsia fa tsy manana fahefana hanasazy ny komity.
Nahemotry ny Filankevi-panjakana amin’ny 11 septambra ny fitsarana ny fitoriana hanemorana na hanafoanana ny fihaikana mpifidy handatsa-bato amin’ny 7 novambra. Nilaza ny ankamaroan’ny mpahay lalàna fa tsy manana fahefana hitsara ny fanapahan-kevitry ny governemanta momba ny fifidianana ny Filankevi-panjakana.
Noho ny fangataham-panazavan’ny praiminisitra, namoaka ny heviny ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC) fa an’ny governemanta ny fandraisana fanapahan-kevitra fihaikana mpifidy amin’ny fifidianana filohan’ny Repoblika, fahefan’ny HCC ny mitsara ny fifanolanana momba ny fihaikana mpifidy handatsa-bato.
Nolavin’ny HCC ny fitoriana na fangatahan’ireo kandidà na ireo nolavina ny firotsahan-kifidiny. Anton’izany ny hoe tsy manan-jo mitory aminy ny amin’izany, afa-tsy ny filohan’ Andrimpanjakana, ny ampahefatry ny mpikamban’ny parlemantera, ny avy amin’ny vondrombahoakam-paritra itsinjaram-pahefana, ny HCDDED.
Nifandroritana be ihany ny amin’ny fametraham-pialan’ny filohan’ny Repoblika, araka ny And. 46 amin’ny lalàmpanorenana. Maro ny fanendrena tomponandraiki-panjakana ambony toy ny masoivoho malagasy any ivelany, tamin’ny filankevitry ny minisitra… farany. Nametra-pialana ihany izy tamin’ny fotoana farany.
Nahemotry ny kaoperativam-pitaterana UCTU, Antananarivo, amin’ny 15 septambra ny fampiakarana ny saran-dalan’ny taxi-be ho 500 Ar. Na izany aza, mbola mampikaikaika ny maro ny fidangan’ny vidim-piainana, ny tsy fandriampahalemana, ny ady tany… Handamina izany ve ny fifidianana… tsy mbola tena milamina?